ဘလော့ဂါတွေအမှားပြင်သင့်သလား။ | Martech Zone
စနေနေ့, ဇူလိုင်လ 19, 2008 သောကြာနေ့, ဇွန်လ 19, 2015 Douglas Karr
အပေါ်အလွန်ကြီးစွာသောဆွေးနွေးမှုရှိပါတယ် ကျောက်တံတား ဒီသီတင်းပတ်မှာ TWIT ကိုကူးသွားပြီးဂျာနယ်လစ်တွေကိုရိုသေလေးစားတယ်။ ဘလော့ဂါများသည်ရိုးရာအဓိပ္ပာယ်ဖြင့်စာနယ်ဇင်းသမားများမဟုတ်ပါ များမှာ စားသုံးသူရှုထောင့်ကနေကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အခါမှာဂျာနယ်လစ်။
ပို့စ်အဟောင်းများသည်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်၏ရလဒ်များတွင် 'ရှင်သန်' နေဆဲဖြစ်ပြီး၊ ဆွေးနွေးထားသောအချက်အလက်များနှင့်ဆက်စပ်သော (မကြာခဏ) မှတ်ချက်များရှိသည်။ Dvorak ကပြန်သွားပြီးအရောင်းအ ၀ ယ်ဟောင်းများကိုပြင်ဆင်ခြင်းသည်အရူးဖြစ်သည်ဟုထင်မြင်သည်။ နို့ယိုယွင်းနေသည်ဟုသူယုံကြည်သည်။ မည်သူမျှမဖတ်သောကြောင့်၎င်းသည်ပြီးဆုံးသွားပြီဖြစ်ပြီးအသုံးပြုသူသည်ဆက်လက်လုပ်ဆောင်သင့်သည်။ လီယိုကသူသည်ဤစာမူကိုပြင်ဆင်ရန်ဖိအားပေးခဲ့သည်ဟုဆွေးနွေးခဲ့သည်။ ငါလီယိုနဲ့သဘောတူတယ်
သတ်မှတ်ချက် - အကယ်၍ ကျွန်ုပ်သည်ဓာတ်ပုံ၊ ကိုးကားချက်၊ ဆောင်းပါးစသည်တို့ကိုဖော်ပြခြင်းလွဲချော်လျှင်ကျွန်ုပ်သည်ပို့စ်၏သက်တမ်းပေါ် မူတည်၍ လိုအပ်သောတည်းဖြတ်မှုများကိုချက်ချင်းပြုလုပ်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့် (အကြွေးဆပ်ရန်လိုအပ်သည့်နေရာတွင်) အကြွေးပေးရန်သေချာစေရန် (တရားဝင်မဟုတ်သော) မဖြစ်မနေလိုအပ်သည်။
မှတ်ချက်များအားဖြင့်ထောက်ပြအမှားများ - ကျွန်ုပ်၏ဘလော့ဂ်မှစာဖတ်သူသည်စာမူတွင်အမှားတစ်ခုကိုတွေ့ရှိသောအခါ၊ ကျွန်ုပ်သည်များသောအားဖြင့်အမှားပြင်ပေးပြီး၎င်းသည်နှစ် ဦး စလုံးအမှားပြင်ဆင်ခြင်းနှင့်သူတို့ပေးသောသတင်းအချက်အလက်ကိုကျွန်ုပ်မည်မျှတန်ဖိုးထားသည်ကိုပြန်လည်တုံ့ပြန်လိမ့်မည်။ ၎င်းသည်အပြောင်းအလဲကိုရေးသားထားသောမှတ်တမ်းအဖြစ်စာဖတ်သူများအားကျွန်ုပ်သည်လူသားမဟုတ်ရုံမကကျွန်ုပ်၏သတင်းအချက်အလက်မည်မျှတိကျသည်ကိုဂရုပြုပါသည်။
ကျွန်ုပ်ရှာတွေ့သောအမှားအယွင်းများ - အမှားနှင့်အမှားကိုညွှန်ပြရန်ကျွန်ုပ်သည် HTML ရှိ strike tag ကိုသုံးမည်။ သပိတ်မှောက်ခြင်းသည်အသုံးပြုရန်ရိုးရှင်းပါသည်။
တနည်းကား, ဒီမခွဲခြားဘဲ post ကို၏အသက်အရွယ်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်၏ပို့စ်များကိုတိတိကျကျဖြစ်စေလိုပြီးကျွန်ုပ်အမှားလုပ်မိသည့်အခါတွင်စာဖတ်သူများအားမြင်စေလိုသည်။ အားလုံးယုံကြည်စိတ်ချရမှုနှင့်ပတ်သက်ပြီး၊ သင်၏အမှားများကိုဝန်ခံခြင်းသည်တန်ဖိုးရှိသည်။
သဒ္ဒါနှင့်စာလုံးပေါင်း - ကျွန်ုပ်သည်သဒ္ဒါအမှားတစ်ခုပြုလုပ်မိသည်ကိုအမှန်စင်စစ်ရှာဖွေတွေ့ရှိသောအခါ (များသောအားဖြင့်တစ်စုံတစ် ဦး ကကျွန်ုပ်အားပြောရန်လိုသည်) ကျွန်ုပ်သည်တည်းဖြတ်ခြင်းပြုပါမည်၊ ကျွန်ုပ်မထုတ်ဖော်ပါ။ ၎င်းသည်ဘလော့ဂ်ပို့စ်၏တိကျမှန်ကန်မှုကိုမပြောင်းလဲနိုင်သဖြင့်ကျွန်ုပ်သည်သဒ္ဒါနှင့်စာလုံးပေါင်းအတွက်မည်မျှကြောက်မက်ဘွယ်ဖြစ်ကြောင်းထုတ်ဖော်ရန်မလိုအပ်တော့ပါ။ ပြီးနောက်ရှိသမျှတို့, ငါ့ပုံမှန်စာဖတ်သူတွေပြီးသားဒီနားလည်သဘောပေါက်!
ငါတွေ့သမျှအမှားတိုင်းကိုပြန်ပြင်သည် (သို့) စာဖတ်သူများကကျွန်ုပ်အားညွှန်ပြသည်။ သင်လည်းလုပ်သင့်သည်။ ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေသည့်ဂျာနယ်လစ်နှင့်မတူသည်မှာကျွန်ုပ်တို့သည်အွန်လိုင်းတည်းဖြတ်ခြင်းတွင်အဆင့်မြင့်စွမ်းရည်များရှိသည်၊ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အားစာမူတစ်ခုအား“ ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေရန်” မလိုအပ်ပါ။
အရင်ပို့စ်ကိုပြင်ဆင်ရန်ဖော်ပြသည့်နောက်ဘလော့ဂ်ပို့စ်တွင်မှတ်စုတစ်ခုထည့်ရန်လိုအပ်သည်ဟုကျွန်ုပ်မယုံကြည်ပါ ဂျွန် markoff Cranky Geeks ပြပွဲတွင်ဖော်ပြထားသည်။ ) ဘလော့ဂ်သည်စကားပြောဆိုဆက်သွယ်မှုနှင့်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုပုံစံဖြစ်သည်။ စာဖတ်သူများသည်အမှားများကိုလက်ခံလိမ့်မည်။
ယုံကြည်စိတ်ချရမှု၊ အခွင့်အာဏာနှင့်တိကျမှန်ကန်မှုကိုကျွန်ုပ်ဘလော့ဂ်၏အမှားများကိုပြင်ရန်အလေ့အကျင့်တစ်ခုဖြစ်စေသည်။ စာဖတ်သူတွေကအဲဒီမှာပါတဲ့သတင်းအချက်အလက်ကိုမယုံပါကဘလော့ဂ်မှာဘာအာဏာမှမရှိဘူး။ သင်၏အမှားများကိုသင်လျစ်လျူရှုပါကသင်၏စာဖတ်သူအရေအတွက်နှင့်သင်၏ရည်ညွှန်းသည့်ဆိုဒ်အရေအတွက်နည်းတူသင်၏ယုံကြည်ကိုးစားမှုလည်းလျော့နည်းသွားလိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်ယုံကြည်သည်။
Tags: blogging မဟာဗျူဟာebookebook မဟာဗျူဟာဆင်းသက်စာမျက်နှာ optimizationဆင်းသက်စာမျက်နှာစာမျက်နှာဖြေရှင်းချက်ခဲမျိုးဆက်စာမျက်နှာmultidomain
DMCA ချိုးဖောက်မှုတစ်ခုအဖြစ် Adsense သို့အကြောင်းအရာခိုးမှုသတင်းပို့ခြင်း
19:2008 pm တွင်ဇူလိုင်လ 11, 23
19:2008 pm တွင်ဇူလိုင်လ 11, 32
ကျွန်ုပ်၏အထက်တန်းအင်္ဂလိပ်အင်္ဂလိပ်ဆရာကကျွန်ုပ်တို့၏ခေါင်းပေါ်သို့တွန်းပို့လိုက်သောကြောင့်အမှားများကို ASAP အမှားပြင်သင့်သည်ဟုငါသဘောတူသည်။ ဟုတ်တယ်၊ ဒါပေမယ့်အဲဒါကမှန်ကန်တဲ့အရာလည်းဖြစ်လို့ပါ။
သင်၏ဘလော့ဂ်ပို့စ်များသည်ကျွန်ုပ်ကိုစိတ်ဝင်စားသည်။ ၎င်းတို့သည်တိုတို၊ သင်၏ထည့်ဝင်မှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ Twitter မှတစ်ဆင့်ကျွန်ုပ်တို့၏စာမူအသစ်များပို့ဆောင်ခြင်းအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
20:2008 pm တွင်ဇူလိုင်လ 12, 34
သင်၏အမှားများကိုသင်ပြုပြင်သင့်သည်ဟုကျွန်ုပ်သဘောတူသည် HTML strikethrough ကိုထောက်ပြသည့်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ အဲဒါကိုဆွဲထုတ်ဖို့ကုဒ်ကဘာလဲ?
20:2008 pm တွင်ဇူလိုင်လ 12, 57
HTML ဆိုတာ မင်းရိုက်ချင်တဲ့စကားလုံးပဲ
20:2008 pm တွင်ဇူလိုင်လ 9, 04
ငါဥပမာတစ်ခုနှင့်အတူ post ကို updated ။ 🙂
20:2008 pm တွင်ဇူလိုင်လ 4, 16
ဒေါက်ဂလပ် - ငါအမှားတွေအတွက်သဘောတူတယ် သူတို့ကိုသင်စွန့်ခွာမယ်ဆိုရင်အနာဂတ်စာဖတ်သူတွေကိုအလေးအနက်မထားဘဲလုပ်ပါ။ အိုး, သင် soapbox အနေအထားယူပါကအပေါ်ကော်ဇောခေါ်ရလျှင်, ငါသမိုင်းကိုပြန်ရေးရန်မင်္ဂလာပါထင်ပါတယ် ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် JMTCW ။
ဘာဘရာလိန်း, Virtual နည်းပြ
20:2008 pm တွင်ဇူလိုင်လ 5, 48
ဘလော့ဂ်အမှားများအတွက်ကျွန်ုပ်၏အဓိကအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်သည်သဒ္ဒါအမှားများကိုအဓိကထားသည်၊ ဥပမာ WWSGD plugin display ကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်မျက်လုံးများကိုသာလှုပ်ချသည်။
ARGH! '' ဟုတ်တယ်၊ ပို့စ်ဟောင်းတွေနဲ့သက်ဆိုင်မှုမရှိဘူး၊
20:2008 pm တွင်ဇူလိုင်လ 9, 01
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘာဘရာ! သငျသညျအကြှနျုပျ၏သဒ္ဒါအမှားများကိုအတူ (နှင့်ထောက်ပြနိုင်) နိုင်မျှော်လင့်ပါတယ်။
သင်ကဲ့သို့သောသူတစ် ဦး ဦး ကသူတို့ကိုဖမ်း။ ကျွန်ုပ်ကိုအသိပေးပြီးနောက်ရှက်ကြောက်ခြင်းကြောင့်သူတို့ကိုငါသာသိပုံရသည်။ ငါနှစ်ယောက်စလုံးပိုသိကြပြီးပညာတတ်ဖြစ်ခဲ့ကြလို့အမြဲတမ်းရှက်ရွံ့နေရတယ်၊ အဲဒါကငါ့ရဲ့အားနည်းချက်ပဲ။
ဂရုစိုက်ခြင်း၊ လေ့ကျင့်ခြင်းနှင့်သက်သေပြခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်သည်အမှားအယွင်းများသိသိသာသာလျှော့ချနိုင်ခဲ့သည်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုနေ့စဉ်စာရေးရန်ကျွန်ုပ်အားတွန်းအားပေးသည့်အကြောင်းရင်းတစ်ခုဖြစ်သည်
20:2008 pm တွင်ဇူလိုင်လ 8, 56
peeple's kommints တွင်အမှားများကိုသင်ပြင်ပေးပါသလား။
20:2008 pm တွင်ဇူလိုင်လ 9, 03
ထင်မြင်ချက်တွင်စာလုံးပေါင်းနှင့်သဒ္ဒါအမှားများကိုကျွန်ုပ်တည့်မတ်ပေးခဲ့သည်ကိုကျွန်ုပ်အပြည့်အဝဝန်ခံပါလိမ့်မည်။ ၎င်းသည် 'အသုံးပြုသူထုတ်လုပ်' သော်လည်းကျွန်ုပ်၏ဘလော့ဂ်တွင်ပါဝင်နေဆဲဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်၎င်းသည်တူညီသောတန်ဖိုးရှိပြီးတူညီသောအာရုံကိုရရှိသည်။ ငါသော်လည်း, မက်ဆေ့ခ်ျကို၏မူလဆောင်ပုဒ်ကိုပြောင်းလဲဘာမှမလုပ်ပါ!
21:2008 pm တွင်ဇူလိုင်လ 4, 49
၎င်းသည်သဒ္ဒါသို့မဟုတ်စာလုံးပေါင်းအမှားဖြစ်ပါက - ကျွန်ုပ်တို့၌ထိုအရာများရှိခဲ့ဖူးသကဲ့သို့! - ငါကအာရုံစူးစိုက်မှုမခေါ်ဘဲက fix လိမ့်မယ်။
ဒါပေမယ့်အကြောင်းအရာအမှားတစ်ခုဆိုရင်တော့အဲဒါကိုပြင်သင့်တယ်လို့ထင်တယ်။ ဘလော့ဂ်တစ်ခုသည်သမိုင်းဝင်မှတ်တမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ဖတ်ပြီးနောက်စွန့်ပစ်သောသတင်းစာမဟုတ်ပါ။ အမှားအယွင်းများကိုသီးခြားထည့်သွင်းမှုတစ်ခုတွင်မပြင်ဆင်သင့်ပါ။ ဘလော့ဂ်များသည်အင်တာနက်၏ကျန်ကဲ့သို့ပင်အမြဲတမ်းတည်ရှိပြီးမှန်ကန်စွာရပ်တည်ရန်မှန်ကန်စွာပြင်ဆင်ထားသင့်သည်။
ဘယ်လိုလဲ သူတို့ဘလော့ဂါတစ် ဦး ချင်းစီအပေါ်မူတည်ပြီးအမှားပြင်မိသည်။ ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျကျွန်ုပ်အမှားကိုပြင်မည်။ အကယ်၍ ၎င်းသည်ကြီးမားလွန်းလျှင်၎င်းကိုငါတည့်မတ်ပေးခဲ့သည်။ ဒါကမြို့ငယ်တစ်ခုလိုလိုသေးငယ်တဲ့အရာဆိုရင်၊ ငါသတိပေးချက်မပါဘဲပြင်မယ်။